म माओवादीलाई समेत एउटै धारमा ल्याउने मान्छेले गुट चलाएको देख्नुभयो ? : प्रम ओली – Sudarshan Khabar
म माओवादीलाई समेत एउटै धारमा ल्याउने मान्छेले गुट चलाएको देख्नुभयो ? : प्रम ओली
सत्तासीन नेकपाभित्र चर्कंदो घर झगडाले एकताको २६ महिनामै कतै पार्टी नै विभाजन त हुँदैन भन्ने आशंका व्याप्त छ। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले पार्टी विभाजन नहुने बताएका छन्।
गत असार १० देखि सुरु भएको पार्टी स्थायी समितिमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत नेताहरूले प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीको राजीनामा मागेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो।
साउन १३ मा स्थायी समिति बैठक नै एउटा पक्षले स्थगित गर्ने र अर्काे पक्षले बोलाउने दोहोरीका बीच विवाद समाधानको थप सूत्र फेला परेको छैन।
प्रधानमन्त्री ओलीले अन्नपूर्ण मिडिया गु्रपको एपीवान एचडी टेलिभिजनमा सुरु भएको कार्यक्रम ‘द बाभ्रो डेल्टा शो’ कार्यक्रममार्फत वरिष्ठ पत्रकार भूषण दाहालले गरेको अन्तर्वार्तामा अबको पाँच दिनभित्रै नेकपाभित्रको सिनारियो नै नयाँ खालको देखापर्ने दाबी गरेका छन्। प्रस्तुत छ, उक्त अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
स्वास्थ्य देखिराख्नु भएको छ। कुनै प्रकारको समस्या छैन। अहिलेको किड्नी ट्रान्सप्लान्ट भन्दा अघिल्लो पटक प्रत्यारोपण गरेको किड्नीले लगभग १३ वर्ष काम गरेको थियो। एक वर्षजति केही समस्या देखिएको थियो। मैले भनेको थिएँ, दोस्रो ट्रान्सप्लान्ट आजको जमानामा ठूलो कुरा होइन। त्यो सहज ढंगले हुन्छ।
मेडिकल मिराकल त त्योभन्दा अघिल्लो पटकको इन्फेक्सनको जुन अप्रेसन भएको थियो, त्यो मेरा लागि खतरनाक थियो, मेडिकल मिराकल जस्तो थियो। यो दोस्रो पटकको ट्रान्सप्लान्ट ठूलो कुरा होइन।
मानिसले भन्ने गरेका छन्, कहिले अमेरिका, कहिले कहाँ भने, म जुन उपचार यहाँ हुन्छ, त्यसकै लागि बाहिर जान्न। यहाँ उपचार नहुने रोगको लागि मात्रै म बाहिर जान्छु। नेपालमै सम्भव हुने भएकाले दोस्रो प्रत्यारोपण यहीं गराएँ, नेपालकै डाक्टरबाट, नेपालकै अस्पतालमा नेपालकै साधन प्रयोग गरेर।
त्यो पनि होला अलिकति। म अनुमान गर्न सक्छु। मैले स्वास्थ्य विज्ञानसम्बन्धी थोरबहुत जानकारी लिएको छु। त्यसको विविध पक्षको विश्लेषण गरेर निष्कर्ष निकाल्छु। त्यसकारण म अप्रेसनमा जानुअघि स्वस्थ भएर फर्कने सुदृढ आश्वासन जनसमक्ष गरेको थिएँ, विश्वास दिलाएको थिएँ। त्यो त्यत्तिकै थिएन।
आफूलाई बिरामी नै ठान्ने हो भने, चारपाँच महिनापछि बेडबाट उठ्छ। सिसाको फ्रेमभित्र बसेजसरी बस्छ। जसरी अहिले हामी कोभिड —१९ को सन्दर्भमा बसेका छौं। त्यसरी नै संक्रमणको खतरा बढी हुन्छ, हामीले अलि बढी ध्यान दिनुपर्छ। क्रमशः प्राकृतिक इम्युन सिस्टम आन्तरिक रूपमा विकास पनि गर्नुपर्छ।
अलिकति तातो लाग्न नहुने, अलिकति चिसो लाग्न नहुने खालको पनि हुनुहुँदैन। नियमित रूपमा औषधी सेवन गर्नुपर्छ। त्यति गरेपछि किड्नी रिजेक्सनको खतरा हुँदैन। रिजेक्सनको खतरा नभएपछि किड्नीले राम्रो काम गर्छ।
आन्तरिक समस्या डोकाले छोपेजस्तो छोप्न चाहन्न। यतिबेला देश बाढीपहिरो र कोरोना महामारीबाट ग्रसित छ। सबै यतातर्फ केन्द्रित हुुनुपर्छ। केही समस्या भए भोलिका दिनमा तिनीहरूको समाधान गर्न सकिन्छ।
नेकपाभित्र अहिले देखिएको विवाद अनुचित, असामयिक र असान्दर्भिक छ। त्यो कुराको तमासा हेर्दा जनता खुसी छैनन्। यस्ता कुराप्रति जनताको विरोध छ, आक्रोश छ। त्यसलाई व्यवहारबाट नै हटाउन सकिन्छ। जनताको सेवामा आफूलाई समर्पित गरेर हटाउन सकिन्छ।
म संसदीय दलको नेता हुनुअघि हाम्रो पार्टी निर्णायक भूमिकामा थिएन। विभिन्न आलोचना भइरहेका थिए।
म दलको नेता भइसकेपछि सांगठानिक, वैचारिक र राजकीय रूपमा पनि देशलाई कसरी अगाडि बढाउने, विकास कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा, अग्रगमन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र कूटनीतिका सन्दर्भमा हाम्रो भूमिका प्रभावकारी र सशक्त बनेको छ। सबै कुरा राम्रो मात्रै भएको छ भनेर म भन्दिन। म आलोचना पनि स्वीकार गर्छु।
राजनीतिमा बिचौलियासँग म आफू चलेको छैन, अर्काेले चलाएको छ भने ककसले सोच्छ मलाई थाहा छैन। तर म अरूद्वारा सञ्चालित र अरूका लागि काम गर्दिन्।
चाहे त्यो देशभित्रको होस् या बाहिरको कुरा। बिचौलिया हुन् कि मझौलिया म वास्ता गर्दिन। यी निराधार कुरा हुन्। मेरो जीवन खुला किताब जस्तै छ। म सत्यविरुद्ध लड्दिन तर शक्तिसँग झुक्दिन।
मलाई आफूले बोलेका शब्दबाट पछाडि हट्न आउँदैन। मेरो कठिनाइ त्यो छ। कहिलेकाहीं राजनीतिमा साथीभाइले मेरो आफ्नो सम्बन्धमा गरेका वचनबद्धताबाट पछाडि हट्दिन। नाफा—नोक्सान जेसुकै होउन्।
मेरो आफ्नो सम्बन्धमा कहिलेकाहीं फरक पार्छन्। मेरा इच्छा कहिलेकाहीं परिस्थितिले फरक पार्छन्। मैले ६५ वर्षको उमेरमा अवकाश लिन खोजेको थिएँ तर परिस्थितिले दिएन।
मेरा साथीहरूले त्यो इजाजत मलाई दिएनन्, मेरो इच्छा थियो। कसैको नैतिक बन्धन हुन्छ। कसैको इमानको बन्धन हुन्छ। बाचाको बन्धन हुन्छ। अनेक प्रकारका बन्धन हुन्छन्। मबाट कुनै बाचा बन्धन भत्किँदैनन्।
गाली त मैले अघिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सुनेको हो। यो गाली मैले ०५१/५२ को अल्पमतको ९ महिने सरकारको पालामा पनि सुनेको हो। जो पछि असाधारण रूपले पपुलर ठानियो, मानियो। मेरो अघिल्लो कार्यकालको सरकार पनि बृहत आलोचनाभित्र मात्र होइन, आलोचना गर्दै त्यसलाई नढाली नहुने अवस्था बन्दै ढाल्ने स्थिति बनेको हो।
तर पछि त्यो सरकार लोकप्रिय सरकारकै रूपमा गनियो। जीवित मान्छेको आलोचना गर्ने र राम्रो मान्छेको प्रशंसा गर्न नसक्ने हाम्रो स्वभाव नै हो। हामी राम्रो कामलाई पनि प्रशंसा गर्न नसक्ने र कहाँ छिद्र भेटिन्छ, छिद्र भेटिएन भने पनि आलोचना गर्ने खालको हाम्रो स्वभावै बनेको छ। त्यो वेग्लै कुरा हो।
यस्तो थियो, विभिन्न देशहरूसँग मैले आफैंले कुरा गरेको छु। भारतका प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मैले कुरा गरेको छु। त्यस्तै हाम्रो परराष्ट्रमन्त्रीले कुरा गर्नु भएको छ। सरकार प्रमुख वा राष्ट्र प्रमुखहरूसँग साधारणतया मैले कुरा गरेको छु भने परराष्ट्रमन्त्रीकोे तहमा परराष्ट्रमन्त्रीले। साझा प्रयास भएकै हुन्। आआफ्ना ठाउँमा रोक्ने भन्ने कुरा गरेका छौं। हाम्रो सहमतिअनुसार नै प्रवेश गर्न नदिने, बोर्डर सिल गर्ने भनेका हौं।
हामीले पनि उता जान दिएनौं। उताबाट पनि आउन नदिने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर हामीले जान दिएनौं, क्वारेन्टाइनमा राख्यौं, यो पार गरेपछि मात्र स्वस्थ रहेको प्रमाणसहित पठायौं। तर उताबाट त्यस्तो हुन सकेन। सीमा क्षेत्रसम्म रेलसेवाको आवागमनले गर्दा मानिस आउने क्रम बढ्यो। तपाईंले भनेका कुरा पनि हामीले सुन्यौं, दुव्र्यवहार आदि इत्यादि कुरा।
अलिकति जनताको सचेतना रहेन र त्यसमा अलिकति पोलिटिक्स खेल्ने काम पनि भयो। प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा पठाइयो दश अर्ब लगभग। त्यो एकमुष्ट हिसाब होइन, त्यति पुग्यो होला भन्ने कसैले भन्यो। खोइ १० अर्ब भनेर ? त्यतिबेला ८ अर्ब तल पठाइसकिएको रहेछ। पैसा भन्नेबित्तिकै खाए नै भन्ने बुझ्ने। स्थानीय तहले कसरी क्वारेन्टाइन बनाउन सक्छ ? त्यो सबै प्रबन्ध कसरी गर्न सक्छ स्थानीय तहले पैसै नभई ? पठाइदिनु परेन ? स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई विश्वास गर्नुपर्‍यो। कि कराउने मान्छेलाई पैसा दिएर तिमी नै गर भन्नुपर्ने ?
त्यस्तो पाइयो भने कारबाही हुन्छ। सबै विषयमा मैले राम्ररी अध्ययन गरिरहेको छु। अखबारमा आएका र विभिन्न व्यक्तिहरूले बोलेका विषयलाई मैले राम्ररी ध्यान दिएको छु।
यदि कोही नेताका परिवारका सदस्य त्यसमा पाइयो भने उनीहरू विजनेशमा छन् वा प्रतिस्पर्धा गरेर आएका छन् भने त्यो म भन्न सक्दिन, किनभने त्यहाँ केही सहभागी भएका हुन सक्छन्, उसको व्यवसाय ठेकेदारी हुन सक्ला। उसले त्यहाँ भाग लिन सक्दैन भन्न त सकिँदैन।
अवश्य। मेरो ध्यान छ र मैले छनबिन गराइराखेको छु। छानबिनबाट आएका विषयबारे फेरि मैले आन्तरिक छानबिन गराउँछु। के छ ? के देखिन्छ ? यहाँ त जसलाई पनि डामेको हुन्छ, अपमान गरेको हुन्छ, त्यस्ता कुराको पछाडि कुद्न सकिँदैन।
केही कुराको आधार छ कि छैन ? अथवा हेर्नुपर्ने, केलाउनुपर्ने, छानबिन गर्नुपर्नेे वा विश्लेषण गर्नुपर्ने केही छ कि छैन ? त्यो हेर्नुपर्छ। अलिकति मात्र पनि निराधार कुरा देखिएन त्यसमा छानबिन हुन्छ।
अलिकति मात्र कसैको दोष देखियो भने त्यसबाट कोही मुक्त हुन सक्दैन। त्यो चाहे मेरै निकटको मान्छे किन नहोस्। अखबारले मेरै छोराले यसो गर्‍यो भनेर नछापुन्। मेरा त छोराछोरी छैनन्, नत्र भने छोराले यसो गरे भनेर छाप्छन् र भोलिपल्ट खण्डन गर्छन्। फेरि मैले चाहिँ सबै मिडियालाई भनेको होइन। केहीको त्यो काम छ। अहिले मैले नाम नलिउँ केहीको कामै त्यही छ।
आजको अवस्था हेर्दा संक्रमण यसरी फैलिइरहेको छ कि डरलाग्दो अवस्था उत्पन्न भएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकको पनि गम्भीर चासो, चिन्ता र सरोकार थियो। यसमा केही निर्णय गरेको छ। हामीले पहिले गरेका निर्णय जो खुकुलो पार्छौं भनेका थियौं, त्यसमा बैदेशिक उडानदेखि लिएर, सीमा नाकासम्मलाई अझ कडाइ गर्ने खालको अवस्था आयो। काठमाडौंमै क्वारेन्टाइनको अवस्था कमजोर छ त्यसको प्रबन्ध हामीले शीघ्र गर्नुपर्ने छ।
जिल्ला जिल्लासम्म त्यसको अभाव हुने अवस्था छैन। क्यारेन्टाइनको प्रबन्ध ठीकै छ। आइसोलेसनको प्रबन्ध पनि त्यस्तो केही छैन। हामीले अलि ठूलो संख्यामा पोजेटिभ केशहरू पनि डिल गरिसक्यौं। पर्सामा बढेको देखिएको छ। त्यसलाई हामी गम्भीरताका साथ लिएर डिल गर्छौं। अरू कतिपय ठाउँमा घट्दो पनि छ। त्यो हामीले चेक गरेका छौं। नियन्त्रण गरेका छौं। चेकअप र उपचार राम्ररी गरेका छौं। संकमण हुन नदिन ध्यान दिएका छौं। सवारी साधन, सामाजिक संघसंस्था र कार्यालय सञ्चालनको सम्बन्धमा सर्तकता जरुरी छ।
भारत हाम्रो छिमेकी हो। दोस्रो मित्र छिमेकी हो। भारतसँग हाम्रो बहुआयामिक सम्बन्ध छन्। कुनै थिचोमिचोको प्रवृत्ति, हेप्ने/हेपिनेको सम्बन्ध, ठूलो वा सानोको सम्बन्ध आवेश उत्तेजना वा अरू कुनै हिसाबले निर्धारण गरिनुहुन्न। राष्ट्रिय हितको कुरा गर्दा न्यायोचित र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई ख्याल गर्नुपर्छ। संवादको माध्यमबाट तथ्यका आधारमा ठन्डा दिमागले गर्नुपर्छ।
भारतले नक्सा छाप्दा तपाईंले केही भन्नु भएन भन्नुभयो तर हामीले ‘डिप्लोमेटिक’ नोट पठाएका थियौं। विरोध गरेका थियौं र वार्ताका लागि आह्वान गरेका थियौं। वार्तामा बस्दैछौं र वार्ताबाटै सम्बोधन गर्दैछौं भने धेरै बोल्नुको अर्थ हुँदैन भन्ने थियो। नक्सा छाप्नुभन्दा हाम्रो मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन वार्ताबाटै निकास खोेज्नुपर्छ भन्ने लागेको हो।
तर त्यहीबीचमा हाम्रो भूमि भएर सडक निर्माणको काम भयो। त्यो राम्रो थिएन। हामीले त्यसपछि पनि विरोध जनायौं। त्यसको पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि नेपाली जनतालाई वास्तविकता प्रष्ट पार्नुपथ्र्याे। त्यसरी हामी अगाडि बढेका हौं।
अरूबाट उक्साइएको, अकूटनीतिक, बलको भाषा, आक्षेप भन्ने खालको जवाफ पायौं। त्यसपछि मैले संसद्मा बोलेको हो। हाम्रा निम्ति सानो पीडाको विषय थिएन। वार्तामा बसेर कुराकानी गरेर प्रमाणका आधारमा कुरा टुंग्याऔं भनेर हामीले भनेका थियौं।
उनीहरूले हाम्रो भूभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरे। हामीले कुरा गरौं भन्दा त्यस्तो खालको जवाफ आयो, देखिहालियो। हामीले हाम्रो भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्‍यौं। कतिपय भारतीय सञ्चारमाध्यमको स्तर, सभ्यता र मापदण्डको कुरा यहाँ नगरौं। भारतीय सभ्यतालाई नै चुनौती दिने खालको सामग्री आए।
भिडियो, राजनीती, समाचार